चीनको सिचुआनमा भर्खरै शक्तिशाली भूकम्पकाे घक्का, क्षेति बारे जानकारी आउनै बाँकि ! - Info Nepal
INFONPLअन्तराष्ट्रियचीनको सिचुआनमा भर्खरै शक्तिशाली भूकम्पकाे घक्का, क्षेति बारे जानकारी आउनै बाँकि !
याे पनि, गर्मी मौसममा घाममा पार्किङमा राखेको स्कुटी वा मोटरसाइकल चढ्दा तपाइँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ ? निश्चय नै असहज हुन्छ । बस्नुअघि उपलब्ध भए कागज वा कपडा राख्नुहुन्छ। अझै बस्नै नसक्ने तातो भए त पानी छर्कनु पनि हुन्छ होला। तर, तपाईले यस्तो तातोलाई कुनै नयाँ उपयोगमा प्रयोग गर्नु भएको छ त ?
अहिले गर्मी मौसम छ । तापमान बढेसँगै भारतमा नयाँ नयाँ जुक्ति लगाउन थालिएको छ। स्कुटीको सिट ता`तेपछि भारतीय उद्यमी हर्ष गोयन्काले डोसा (दक्षिण भारतको लोकप्रिय खानेकुरा) पकाउन प्रयोग गरेका छन्। डोसा तयार गरेको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
एक व्यक्तिले तमिलमा ‘माभु’ भनेर चिनिने डोसा दिउँसोको समयमा स्कूटरमा गोलाकार आकारमा फैलाएकाे देख्न सकिन्छ । भिडियोको क्याप्सनमा भनिएको छ, ‘गर्मीमा बाहिर ४० डिग्री तापक्रममा पेसेवरहरूले गरेको भेस्पा डोसा ।’ भिडियोमा अलिअलि खैरोे आधा पाकेको जस्तो डोसा देखाइएको छ । भिडियाे हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।